ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “အခြေခံဥပဒေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မပြင်ဘဲနဲ့တော့ တိုင်းပြည် ဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု သူရဦးအောင်ကို ပြောကြား (ရုပ်သံ)
“အခြေခံဥပဒေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မပြင်ဘဲနဲ့တော့ တိုင်းပြည် ဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု သူရဦးအောင်ကို ပြောကြား (ရုပ်သံ)
ဦးအောင်ကို ပြောသွားတာကို ကျေနပ်အားရမိပါတယ် ။
လို တိုင်းပြည် အကောင်းဘက် ရွေ.ဖို. လူသိရှင်ကြား မပြော ကြတော.ဘူးလါး ။
လူဆိုတာ ကိုယ်.ရဲ.သမိုင်း ကောင်းအောင် ကိုယ်ရေးကြ
အဲလိုမှ မရေးခဲ.ရင် ရှင်တို. သေသွားရင်တောင်
ကိုယ်.သားသမီး တွေက ကိုယ်.ကို တလေးတစား
လွှတ်တော်ထဲမှာ လက်ညှိုးထောင် ၊ ခေါင်းညိမ်. လုပ်
နေပြီး မိမိရဲ. အဖိုးတန် ဘ၀ကို သိက္ခာ နိမ်.ပါးစွာနဲ.
မကုန်ဆုံး ပါစေနဲ. ။